Global Voices teny Malagasy » India: Mpanao gazety mpitoraka bilaogy nanelanelana hanavotana polisy takalon’aina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Oktobra 2009 20:18 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Lila
Sokajy: India, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety
Tao amin'ny fanjakan'i Bengal andrefana dia nisy ady nifanandrinan'ny mpioko maoista(Naxalites ) sy ny miaramilam-pirenena. Noraran'ny fitondrana tamin'ny volana jona lasa teo ny Antoko Komonista Indiana (Maoista), antoko miafina sady tsy manana solontena ao amin'ny antenimiera, noho ny lalàna mandrara ny hetsika tsy manara-dalàna ka nanondroany io antoko io ho fikambanana mpampihorohoro .
Sans Serif no nitatitra fa omaly dia mpanao gazetin'ny BBC roa mpitoraka bilaogy ao amin'ny Subir Bhowmik  “no nanampy tamin'ny famahana ny olana teo amin'ny fanjakana sy ireo maoista, mandrapaha-afak'i Atoa Dutta. Ny tohiny dia ny famoahan'ny fitsarana didy manafaka ireo vehivavy 14 tany am-ponja tamin'ny alalan'ny fandoavana caution.
Araka ny voalazan'ny mpanao gazety iray ao amin'ny Times of India, dia “nanelanelana sy nampifandray ny mpioko sy ny fanjakana” ireto mpanao gazetin'ny BBC ireto satria ny lehiben'ny maoista, Koteshwara Rao  antsoina hoe koa Kishenji, dia nanda tsy nety niresaka mivantana tamin'ireo solon-tenam-panjakana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/10/28/3971/
 fikambanana mpampihorohoro: http://www.hindu.com/2009/06/23/stories/2009062358320100.htm
 Subir Bhowmik: http://subirbhowmikscolumn.blogspot.com/
 Koteshwara Rao: http://www.rediff.com/news/2009/oct/22exclusive-maoist-leader-kishenji-speaks-out.htm